အွန်လိုင်း PDF ကိုမှ JPG အဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့ကိုဘယ်လို - အွန်လိုင်းန်ဆောင်မှုများ - 2019
အွန်လိုင်း PDF ကို-စာရွက်စာတမ်းအတွက် JPG image ကို convert
စည်းကမ်းအဖြစ်, အမှားကုဒ် 54 iTunes ကိုဒုက္ခတစ်ဦးချိတ်ဆက် Apple ကကိရိယာအစီအစဉ်မှဝယ်ယူမှုလွှဲပြောင်းရှိခြင်းကြောင့်အသုံးပြုသူပြောပြသည်။ ထို့ကြောင့်အဘယ်သူမျှမကနောက်ထပ်အသုံးပြုသူလုပ်ရပ်များဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းမှာပါရည်ရွယ်ရပါမည်။
Method ကို 1: အဆိုပါ Re-ခွင့်ပြုချက်ကွန်ပျူတာ
ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ကျနော်တို့ပထမဦးဆုံးကွန်ပျူတာ deavtoriziruem, အဲဒီနောက် reauthorization ဖြုန်းနေကြတယ်။
ဒီလိုလုပ်ဖို့ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "အကောင့်" နှင့်အပိုင်းကိုသွား "Exit ကို".
ယခုတွင်သင်သည် deavtorizirovat ကွန်ပျူတာလိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, Re-ပွင့်လင်း tab ကို "အကောင့်", ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်အပိုင်းကိုသွား "ခွင့်ပြုချက်" - "ဒီကွန်ပျူတာ Deavtorizirovat".
သင့်ရဲ့ Apple ID များ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသတ်မှတ်ခြင်း, ကွန်ပျူတာခွင့်ပြုခြင်းပယ်မည်အတည်ပြုပါ။ ဤအလုပ်ရပ်များဖျော်ဖြေပြီးနောက် tab ကို "အကောင့်" မှတဆင့် iTunes ကို Store မှာပြန်လည်ခွင့်ပြုချက်နှင့်ကွန်ပျူတာ entry ကိုလုပ်ပါ။
Method ကို 2: အဟောင်းရန်သင့်သိမ်းဆည်းချက်တွေကိုဖယ်ရှားခြင်း
iTunes ကိုထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ Backup အဟောင်းကို, သတင်းအချက်အလက်များ၏မှန်ကန်သောလွှဲပြောင်းမဖြစ်နိုင်ဖြစ်လာအဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သောသစ်နှင့်အတူဆန့်ကျင်စေနိုင်သည်။
ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ကျနော်တို့အဟောင်း Backup တွေကိုဖျက်ပစ်ရန်ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ ဒီအလုပျကို iTunes ကနေသင့်ရဲ့ device ကိုပြတ်တောက်ကြောင်းသေချာအောင်, အဲဒီနောက်ကိုနှိပ်ပါ "Edit ကို" နှင့်အပိုင်းကိုသွား "Settings" ကို.
အဆိုပါ tab ကိုသွားပြီး "Devices"။ မျက်နှာပြင်ရန်သင့်သိမ်းဆည်းချက်တွေကိုရှိပါတယ်ရာများအတွက် devices တွေကိုစာရင်းတစ်ခုပြသပါလိမ့်မယ်။ 54 ဖော်ပြပေးသောမှားယွင်းမှုတစ်ခုနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နေစဉ်, device ကို left mouse ကိုခလုတ်မီးမောင်းထိုးပြ, ကိုနှိပ်ပါ "Backup ကိုဖျက်ပစ်ပါ".
တကယ်တော့ backup လုပ်၏ဤဖယ်ရှားရေးကိုသင် setting များကိုဝင်းဒိုးကိုပိတ်လိုက်ပြီး iTunes ကိုနှင့်အတူသင့်ရဲ့ device တွေကိုတပြိုင်တည်းအလုပ်လုပ်မှထပ်ကြိုးစားကြည့်နိုင်ပါတယ်ဆိုလိုတာက, ပြည့်စုံသည်။
Method ကို 3: Device ကို reboot လုပ်ပါ
စနစ်ကပျက်ကွက်အမျိုးမျိုးသောအမှားများကိုပေါ်ပေါက်ရေးပြောခြင်းငှါအရာသည်သင်၏ Apple ကကိရိယာပေါ်တွင်ရှိနိုငျတယျ။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သင်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာနှင့် device ကို reboot ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
(သင်က "Start ကို" ဖွင့်နှင့် "Down Shut" ကိုသွားကြဖို့လိုအပ်ပါ - "ပြန်လည်စတင်ပါ") ကွန်ပျူတာအားလုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းလျှင်, ပန်းသီး gadget ကသငျသညျ (သည်အထိတန်ခိုးကိုသော့နှင့်က "ပင်မစာမျက်နှာ" ကြည်လျှင်, လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်တဲ့အတင်းအကျပ်ပြန်ဖွင့်ဖျော်ဖြေဖို့အကြံပြုသည် ကခက်ခဲ cut-off device ကိုမှီတိုငျအောငျ,) အကြောင်းကို 10 စက္ကန့်ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန် mode မှာနှစ်ဦးစလုံး devices တွေကို load, ပြီးတော့အမှားများကို 54 တို့အတွက်စစ်ဆေးပါ။
Method ကို 4: iTunes ကိုပြန် install လုပ်
အသစ်က iTunes ကို install လုပ်ရန်သင့်အားတောင်းမည်သည့်ပြဿနာမှဖြေရှင်းချက်၏အစွန်းရောက်လမ်း။
လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးစွာ iTunes ကိုကွန်ပျူတာကနေဖယ်ရှားပစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်, ထိုသို့နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ပြုမိရမည်ဖြစ်သည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, သင် mediakombayn, ဒါပေမယ့်လည်းကွန်ပျူတာထဲမှာ install Apple ကအခြားပရိုဂရမ်များ, မသာဖယ်ရှားပစ်ရမည်။
iTunes ကိုဖယ်ရှားပြီးနောက်ကွန်ပျူတာ reboot, ကိုလက်စသတ်နေသည်, ပြီးတော့တရားဝင်ဖြန့်ဖြူး site မှ iTunes ကို၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးကွန်ပျူတာပေါ်တွင် installation ပရိုဂရမ်ကို run ပါ။
ဒီရိုးရှင်းတဲ့နည်းစနစ်များများသောအားဖြင့်သင်ကပြဿနာဖြေရှင်းရေး၏သင့်ကိုယ်ပိုင်နည်းလမ်းများရှိပါကမှတ်ချက်များအတွက်သူတို့ကိုအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြ, အမှား 54 ဖယ်ရှားပစ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။